Soomaali Dacwad Ka Gudbiyay Shirkadda Amazon | Warmaalnews.com
Soomaali Dacwad Ka Gudbiyay Shirkadda Amazon
“Dacwadahan ayaa sidoo kale sheegaya in shirkadda Amazon ay samaysay midab takoor, shaqaalaha Soomalida iyo kuwa ka soo jeeda bariga Afrika ee u qalma dalacsiinta aan la siin iyada oo sad-bursi loo samaynayo shaqaalaha caddaanka islamarkana jawi adag ay ku shaqeeyaan,” waxa sidaasi lagu sheegay bayaan uu soo saaray urur kiiskan u matalaya haweenka cabanaya.
Shaqaalahan ayaa markii ay cabashada u gudbiyeen shirkadda, waxaa la siiyay “qoraalo iyo digniino” ku aadan in shaqada laga ceyrin doono.
“Dadka aan matalyno waa la dhibaateeyay waana la bartilmaameedsaday sabab la’aan, iyada oo la eegayo diintooda, midibkooda iyo meesha ay ka so jeedaan,” ayey tidhi Nimra Azmi, oo ah qareen ka tirsan urur u dooda muslimiinta.
Cabashadan ayaa sidoo kale muujinaysa in markii shaqaalaha ay cabasho u gudbiyeen shirkadda Amazon ay mamulka shirkadda billaabeen “olola aargoosi ah oo lagu dhibaataynayo shaqaalaha”.
Labo ka mid ah saddexda qof ee shaqaalaha ee cabashada gudbiyay ayaa wali ka shaqeeya halka midka kalana “shaqada laga tiray” bishii Disembar.